जापानमा स्वागत छ!
लेख, शहर, प्रान्त वा क्षेत्र मा क्लिक गर्नुहोस्। यदि तपाईं नक्शामा क्लिक गर्न सक्नुहुन्न भने, कृपया तल बटन क्लिक गर्नुहोस् र शहर, प्रान्त वा क्षेत्र तपाईं हेर्न चाहानुहुन्छ छनौट गर्नुहोस्।
क्षेत्र र प्रान्तहरू
ओमोरी अकिता इवाते
यमागाटा मियागी फुकुशिमा
गुन्मा टोचिगि इबाराकी
सैटमा चिबा टोक्यो
निगाता टोयामा इशिकावा
फुकुइ नागानो गिफु
योमानाशी Aichi शिजुओका
क्योटो शिगा ओसाका
ह्योगो नारा वाकायामा
tottori शिमेन ओकेयामा
कोची कागवा एहिम
फुकुओका सागा नागासाकी
कुमामोटो ऑइटा मियाज़ाकी
फोटोहरू: क्योटोमा कियोमिजुदेरा मन्दिर
क्योटोमा सबैभन्दा लोकप्रिय पर्यटकीय आकर्षणहरू हुन्: फुशिमी इनारी तीर्थ तीर्थ, किंकाकुजी मन्दिर र कियोमिजुदेरा मन्दिर। कियोमिजुदरा मन्दिर क्योटो शहरको पूर्वी भागमा भएको पहाडको भित्तामा अवस्थित छ र मुख्य हलबाट १ 18 मिटर उचाइमा रहेको दृश्य भव्य छ। कीयोमिजुडेरा मन्दिरको भर्चुअल ट्रिपमा जाऔं! क्योटोमा कियोमीजुदेरा मन्दिरको फोटो क्योटोमा क्यियोमिजुदरा मन्दिर = शटरस्टॉक क्योटोमा क्यियोमिजुदरा मन्दिर = शटरस्टॉक क्योमिजुडेरा मन्दिर क्योटोमा = शटरस्टॉक कियोमिजुदेरा मन्दिर क्योटोस्टोकट क्योस्टोस्ट्रोक क्योमोटोराइट मंदिर क्योटोज्डुटर मंदिर क्योटोमा = शट्टरस्टक कियोमिजुदेरा मन्दिर क्योटोमा = शटरस्टक म्याप कियोमिजुदेरा मन्दिरको म तपाईंलाई प्रशंसा गर्दछु अन्त सम्म। फिर्ता गर्न "Best of Kyoto"सम्बन्धित पोष्टहरू: फोटोहरू: क्योटोमा कोडाईजी मन्दिर फोटोहरू: क्योटोको नानजेन्जी मन्दिर फोटोहरू: क्योटोको रुरीकोइन मन्दिरको जादू फोटोहरू: तोफुकुजी मन्दिरमा शरद colorsतु र colors्ग, फोटो क्योटोमा दाइटोकुजी मन्दिर - प्रकृति क्योटोको साथ समन्वयमा जेनको विश्व। २ Best सर्वश्रेष्ठ आकर्षणहरू: फुशिमी इनारी, कियोमिजुडेरा, किंकाकुजी आदि फोटोहरू: एकान्डो जेनरिन-जी मन्दिर - सबैभन्दा सुन्दर शरद colorsतुका मन्दिरहरू फोटोहरू: क्योटो इम्पीरियल प्यालेस (क्योटो गोशो) फोटोहरू: ग्रीष्मकालीन फोटोहरूमा पारंपरिक क्योटो: क्योटोमा चेरी फूल फोटोहरू: क्योटोमा कामोगावा फोटोहरू: क्योटोमा शरद leavesतु हुन्छ
फोटो हिम गन्तव्यहरू
फोटोहरू: जापानमा हिउँले ढाकिएका गाउँहरू
म तपाईंसँग जापानको हिउँ परेको गाउँको दृश्य साझेदारी गर्न चाहन्छु। यी शिराकावा गो, गोकायामा, मियामा र ओचि-जुकुका तस्वीरहरू हुन्। कुनै दिन, तपाईं यी गाउँहरूमा शुद्ध संसारको आनन्द लिनुहुनेछ! हिउँले ढाकिएका गाउँहरू शिराकागोगो (जिफु प्रान्त) शिराकावागो, जिफू प्रान्त शिराकावागो, जीफू प्रान्त संरक्षक काकाकागो गोकायामा (तोयामा प्रीफेक्चर) गोकायामा, तोयामा प्रीमाक्चर गोकायामा क्योकैमाकोया, कायामामा क्युकोमाया कीयामाया, प्रियाक्चर मियामा, क्योटो प्रियाक्चर मियामा ओची-जुकु (फुकुशिमा प्रान्त) ओची-जुकु, फुकुशिमा प्रान्त ओची-जुकु, फुकुशिमा प्रान्त ओपची-जुकुको नक्शा के के लगाउने जब म हिउँदो गाउँहरूमा पढ्दा तपाईंलाई कदर गर्छु। "हिउँका गन्तव्यहरू" सम्बन्धित पोष्टहरूमा फर्कनुहोस्: फोटोहरू: माउन्ट। फूजी हिउँले कभर गरिएको १२ जापानमा सर्वश्रेष्ठ हिमस्थानहरू: शिराकावागो, जिगोकोदानी, निसेको, सप्पोरो हिम उत्सव ... फोटोहरू: जापानमा के-कारहरू फोटोहरू: सकुरा-जापानमा चेरी फूलहरू फोटोहरू: मिहारू तकिजाकुरा-जापानमा सर्वश्रेष्ठ चेरी रूख ! फोटोहरू: San'in -A रहस्यमय भूमि जहाँ पुरानो जमाना जापान रहन्छ! फोटोहरु: नारा - जापानको पुरानो राजधानी जापानमा स्वागत छ! Beautiful० राम्रा फोटोहरूको मजा लिनुहोस्! फोटोहरू: कामिकोचीको चार सत्राहरू फोटोहरू: टोकियो खाडीमा ओडाइबा फोटोहरू: हाकोडाटे फोटोहरू: माई प्रान्तमा जियुगल तीर्थ
2020 /6/ 4
फोटोहरू: Biei र गर्मी मा Furano
गर्मीमा होक्काइडोमा सबैभन्दा लोकप्रिय पर्यटन गन्तव्यहरू बीइ र फुरानो हुन्। यी क्षेत्रहरू होक्काइडोको मध्यमा अवस्थित छन्, असभ्य मैदानहरू छन्। रंगीन फूलहरू त्यहाँ फूल्छन्। यस मैदानमा प्रकृति परिवर्तन देखेर तपाईंको दिमाग ठीक हुनेछ। Biei र Furano को रूपमा, म पहिले नै केहि लेख लेखेको छु। जे होस्, म गर्मी घासको मैदानको सौन्दर्य अझ बढी परिचय गराउन चाहन्छु, त्यसैले म यहाँ फोटो सुविधा संक्षेप गर्छु। कृपया Biei र Furano को बारे मा निम्नलिखित लेख मा सन्दर्भ गर्नुहोस्। गर्मी मा सुन्दर पृथ्वी Biei, Hokkaido, जापान मा सूर्योदय, Adobestock Biei, Hokkaido, जापान = Shutterstock अफ्रीकी मैरीगोल्ड, साल्विया सुन्दर फूल होर्कैडो मा प्रसिद्ध र सुन्दर Panoramic फूल बगान Shikisai-no-oka मा रंगीबेरंगी पहाड रंगीन पहाड। , जापान = शटरस्टक लभेन्डर, सनराइज पार्क, फुरानो, होक्काइडो, स्कार्लेट ageषि ब्लास्म, जापान = शटरस्टक टोमिटा फार्म, फुरानो, होक्काइडो, जापान = शटरस्टकमा लिभेन्डर मैदानमा उभिएकी आइमाई बिया र फुरानोका अन्य सुन्दर दृश्यहरू चो, होक्काइडो = एडोब स्टक केन र मरियम रूख, Biei-cho मा एक प्रसिद्ध ठाउँ, Hokkaido जापान = Hutkaido मा Shutterstock सूर्यफूल फूल, Hokkaio मा Oka टेन्बो पार्क, जापान = Bieishirogane शहरको Shutterstock निलो पोखरी = Bieishirogane को शटरस्टक नीलो पोखरी = होक्काइडो साँझ परिदृश्यमा AdobeStock शाम। Biei Hokkaido, जापान = Biei, Hokkaido, जापान मा Shutterstock सूर्यास्त Biei, Hokkaido, जापान = Shutterstock नक्शा Biei Furano म अन्त मा पढेर तपाईं सराहना गर्दछ। फिर्ता गर्न "Best of Hokkaido"...
फोटोहरू: गेशा, क्योटोमा गीशा (माइको र गेगी)
जापान अझै पनी "geisha" संस्कृति छ। गीशा महिलाहरू हुन् जसले आफ्ना पाहुनाहरूलाई जापानी नृत्य र गीतहरूको साथ सम्पूर्ण हृदयले मनोरन्जन गर्छन्। गीशा एदो अवधिमा अवस्थित रहेको रिपब्लिकन "Oiran" भन्दा बिलकुलै फरक छ। क्योटोमा, गेशालाई "geigi" भनिन्छ। प्रशिक्षु युवा गेशालाई "maiko" भनिन्छ। हालसालै, कम्पनीका लागि काम गर्ने महिलाहरू गेशा हुन सक्छन्। यसभन्दा पहिले मैले गीशालाई धेरै पटक अन्तर्वार्ता लिएको छु। तिनीहरूले धेरै बौद्धिक र नाजुक बेहोरा सिकेका छन् र परम्परागत संस्कृति को मूल्यवान उत्तराधिकारी हो। क्योटोमा, घटनाहरू वसन्त र शरद heldतुमा आयोजित गरिन्छ जहाँ तपाईं गीशा नृत्य हेर्न सक्नुहुन्छ। गीशा पनि जुलाईमा जिओन फेस्टिवलमा एक सक्रिय भूमिका खेल्छन्। कृपया गीशा संस्कृति प्रयास गर्नुहोस्! Gion का फोटो Gion = Shutterstock Gion का फोटोहरू = Gion का Shutterstock फोटोहरू Gion = Shutterstock Photos Gion = Shutterstock Photos Gion = Shutterstock Photos of Gion = Shutterstock Photos of Gion = Shutterstock Photos of Gion = Shutterstock मानचित्रको। Gion म तपाईंलाई अन्त मा पढ्न सराहना गर्दछ। फिर्ता गर्न "Best of Kyoto"सम्बन्धित पोष्टहरू: फोटोहरू: क्योटो इम्पीरियल प्यालेस (क्योटो गोशो) फोटोहरू: ग्रीष्मकालीन पारंपरिक क्योटो फोटो: क्योटोमा कोडाइजी मन्दिर फोटोहरू: क्योटोमा चेरी फूलहरू फोटोहरू: क्योटोमा क्योमाजिदेरा मन्दिर फोटोहरू: क्योटोमा कामोगावा नदी फोटोहरू: क्योटोमा नानजेन्जी मन्दिर फोटोहरू : क्योटो फोटोहरूमा जिदाई मत्सुरी महोत्सव फोटोहरू: अरश्यामा, क्योटो फोटोहरूको शानदार रोशन "हनाटौरो" फोटो: किफ्यून, कुरामा, ओहारा हिउँदमा - उत्तरी क्योटो फोटो वरिपरि घुम्दै फोटो: दैतोकुजी मन्दिर ...
फोटोहरू: किंकाकुजी बनाम जिन्काकुजी - कुन मनपर्दो छ?
तपाइँ कुन चाहानुहुन्छ, Kinkakuji वा Ginkakuji? यस पृष्ठमा, मलाई क्योटो प्रतिनिधित्व गर्ने यी दुई मन्दिरहरूको सुन्दर फोटोहरू परिचय गराउँनुहोस्। किंकाकुजी र जिन्काकुजीको बारेमा अधिक जानकारीको लागि, कृपया तलका लेखहरू हेर्नुहोस्। क्योटो, जापानको किन्काकुजी र गिन्काकुजी गिन्काकुजी मन्दिरको फोटो, जापान = क्योटोको जापान = शटरस्टॉक गिन्काकुजी मन्दिर, जापान = क्योटोमा शटरस्टॉक गिन्काकुजी मन्दिर, जापान = क्योटोमा जापान = शिक्ट्सक मन्दिर जापान = क्योटोमा जापान = शटरस्टॉक किन्काकुजी मन्दिर, जापान = क्योटोमा शटरस्टॉक गिन्काकुजी मन्दिर, जापान = क्योटोको एडोबस्टक किंकाकुजी मन्दिर, जापान = किन्टाकुजीको शटरस्टक नक्शा गिन्काकुजीको नक्शा म तपाईंलाई अन्तमा पढ्न प्रशंसा गर्दछु। फिर्ता गर्न "Best of Kyoto"सम्बन्धित पोष्टहरू: फोटोहरू: क्योटोमा कोडाईजी मन्दिरको फोटोहरू: क्योटोमा ऐतिहासिक पहाडी सडकहरू-सन्नेइ-जाका, निनी-जाका, आदि। फोटोहरू: जिदाई मत्सुरी महोत्सव क्योटोमा फोटोहरू: क्योटोमा चेरी फूलहरू फोटो: क्योटो इम्पीरियल प्यालेस (क्योटो) गोशो) फोटोहरू: किफ्यून, कुरमा, ओहारा जाडोमा - उत्तरी क्योटो क्योटोको चारैतिर घुम्दै! २ Best उत्तम आकर्षणहरू: फूशिमि इनारी, कियोमिजुडेरा, किंकाकुजी आदि फोटोहरू: नारा - जापानको पुरानो राजधानी फोटो: गीशा (मैको र गेगी), क्योटो फोटोहरू: ग्रीष्म Photosतुमा परम्परागत क्योटो: जापानमा हिउँले ढाकेका गाउँहरू फोटोहरू: कोयासन
दक्षिणी होक्काइडोमा हकोडाटे जनवरीदेखि मार्चसम्म हिउँले ढाकिएको छ। यस समय हकोडाटे अति सुन्दर छ। बजारमा एसियाची भनिने समुद्री खाना चामलको कचौरा पनि उत्तम छ। Hakodate को लागि एक भर्चुअल यात्रा गरौं! विवरणको लागि कृपया तलको लेख हेर्नुहोस्। माकडबाट हकोडेट नाइट दृश्यका फोटाहरू। हाकोडाटे = शटरस्टक शीतकालीन दृश्य माउन्ट हकोडेटबाट = शटरस्टक माउंट। हाकोडाटे पोर्ट = शटरस्टकबाट देखा परेको हकोडेट शहर मोटोमाचीको श्लोरबाट देखियो = शटरस्टक शहर ट्राम हाकोडेटमा चलिरहेको छ = शटरस्टक हकोडाट शहर जाडोमा कनोमरी एके रेन्गा सोको हकोडेट स्टेशन समुद्रीतको पासमा मार्केट मार्केट बिहानको बजार = शटरस्टक सुन्दर ढंगले प्रज्जवलित गोरियोकाकू = शटरस्टक हकोडाट सहरको एक सुन्दर माउन्ट कोमागाटाके छ = शटरस्टक तपाई स्कोइ and र स्नोबोर्डि enjoyको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ हकोडाटको उपनगरीय शहरमा ओनुमा पार्कले तपाईको प्रशंसा गर्दछ शटरस्टक नक्शा। अन्तमा। "Hakodate को सर्वश्रेष्ठ" सम्बन्धित पोष्टहरूमा फर्कनुहोस्: Hakodate! Best उत्तम पर्यटक आकर्षण र गर्नु पर्ने कुराहरु फोटो: ग्रीष्म inतुमा बीआई र फुरानो फोटो: होक्काइडोमा तौशुबेतु पुल फोटो: होक्काइडोमा तोमामु फोटोहरू: होक्काइडोमा घोडा फोटोहरू: तोकाचीमा सुन्दर वन, होक्काइडो फोटोहरू: नोबोरिबेत्सु ओन्सेन-होक्काइडोको सबैभन्दा ठूलो तातो वसन्त रिसोर्ट फोटोहरू : योकोहामा फोटोहरू: कोयासन फोटोहरू: जापानमा हिउँले ढाकिएका गाउँहरू फोटोहरू: ओकिनावाको सुन्दर सागर १ - अन्तहीन सफा पानी फोटोहरूको आनन्द लिनुहोस्: रातको दृश्य ...
फोटोहरू: फुकुशिमा प्रान्तमा तादामी लाइन
यदि तपाईं रेलबाट सुन्दर जापानी दृश्यको आनन्द लिन चाहानुहुन्छ भने, म पश्चिमी फुकुशिमा प्रान्तमा जेआर ताडामी लाइनको सिफारिश गर्दछु। ताडामी रेखा आइजु-वाकामात्सुबाट थाल्छ जुन एक पुरानो शहर हो जहाँ तपाईं हिमालहरूको माध्यमबाट जापानको समुराई संस्कृति महसुस गर्न सक्नुहुनेछ। फुकुशिमा प्रान्तमा तादामी लाइन जेआर तादामी लाईन = फुकुशिमा प्रान्तमा शटरस्टॉक जेआर तादामी लाईन फुकुशिमा प्रान्तमा शटरस्टॉक जेआर तादामी लाईन फुकुशिमा प्रान्तमा शटरस्टॉक जेआर तदामी लाइन एफआर फुदुशीमा फुकुशिमा प्रान्तमा पिक्सटा जेआर तादामी लाइन = फुकुशिमा प्रान्तमा शटरस्टॉक जेआर तादामी लाईन = फुकुशिमा प्रान्तमा पिक्सटा जेआर तादामी लाइन = आइजु-वाकामात्सुको शटरस्टक नक्शा म अन्तसम्म पढ्दा तपाईलाई कदर गर्छु। फिर्ता गर्न "Best of Fukushima"सम्बन्धित पोष्टहरू: तस्बिरहरू: फुकुशिमा प्रान्तको ओकिजुकु गाउँ फोटोहरू: फुकुशिमा प्रान्तमा हनमियामा पार्क फुकुशिमा प्रान्त! उत्तम आकर्षण र गर्नु पर्ने कुरा फोटो: मिहारू तकिजाकुरा - जापानमा सर्वश्रेष्ठ चेरी रूख फोटोहरू: माई प्रीफेक्चरमा आईस जिन्गु मन्दिर: इशिकावा प्रान्तको कानाजावा फोटोहरू: यामागुची प्रान्तमा मोटोनोसुमी तीर्थ फोटो: नागासाकी प्रान्तको गुन्कंजीमा टापु फोटोहरू: शिगा प्रान्तको बिवाको उपत्यका फोटो: मियागाकी प्रान्तको ताकाचीहो फोटोहरू: हिउँले ढाकेका जापानमा
फोटोहरू: बेप्पू (१) राम्ररी चम्किलो तातो वसन्त रिसोर्ट
कप्पुको पूर्वी भागमा अवस्थित बेप्पू जापानको सबैभन्दा ठूलो तातो वसन्त रिसोर्ट हो। जब तपाईं बप्पू जानुहुन्छ, तपाईं पहिला तातो स्प्रि atहरूमा चकित हुनुहुनेछ जुन यहाँ र त्यहाँ वसन्त हुन्छ। जब तपाईं पहाडबाट बप्पूको शहर दृश्यमा हेर्नुहुन्छ, तपाईं यस पृष्ठमा देख्न सक्नुहुन्छ, स्टीम जताततै उदाउदै छ। तिनीहरू कुनै पनि हालतमा आगो हुदैनन्। रातमा, यी स्टीमहरू रोशनीका साथ सुन्दर देखिन्छन्। बेप्पूको नक्सा बप्पूको नक्शा अन्तमा पढेर तपाईलाई कदर गर्छु। कृपया अन्य फोटोहरू हेर्नुहोस्। मेरो बारे "बप्पुको बेस्ट" मा फर्कनुहोस् बोन कुरोसवा मैले लामो समयदेखि निहोन केजाई शिम्बुन (NIKKEI) को लागि वरिष्ठ संपादकको रूपमा काम गरें र हाल स्वतन्त्र वेब लेखकको रूपमा काम गर्दैछु। NIKKEI मा, म जापानी संस्कृति मा मिडिया को प्रमुख संपादक थियो। मलाई जापानको बारेमा धेरै रमाईलो र चाखलाग्दो चीजहरू दिनुहोस्। अधिक विवरणको लागि कृपया यस लेखलाई सन्दर्भ गर्नुहोस्। सम्बन्धित पोष्टहरू: फोटोहरू: बेप्पू ()) विभिन्न स्टाइलहरूमा तातो स्प्रि !हरूको आनन्द लिनुहोस्! बेप्पू! जापानको सबैभन्दा ठूलो तातो वसन्त रिसोर्टमा आनन्द लिनुहोस्! फोटोहरू: बेप्पू ()) आउनुहोस् विभिन्न हेल्स (जिगोोकु） फोटोहरू: बप्पु (२) चार मौसमको सुन्दर परिवर्तनहरू फोटो: नोबरीबेट्सु ओन्सेन-होक्काइडोको सबैभन्दा ठूलो तातो वसन्त रिसोर्ट शाइनिंग स्प्रिंग र टाढा हिउँको दृश्य: १० राम्रा तस्बिरहरूबाट! फोटोहरू : हाकोन - सिफारिश गरिएको तातो वसन्त क्षेत्र टोकियोको नजिक फोटोहरू: होक्काइडोको निसेको स्की रिसोर्टमा जाडो-पाउडर हिउँको आनन्द लिनुहोस्! फोटो: किनोसाकी ओन्सेन-ह्योगो प्रान्तको लोकप्रिय परम्परागत तातो वसन्त शहर: जिन्जान ओन्सेन -ए रेट्रो हट स्प्रि ... ...
तस्विरहरु: Miharu Takizakura - जापान मा सर्वश्रेष्ठ चेरी रूख!
यदि तपाईंले मलाई जापानको सबैभन्दा सुन्दर चेरी ब्लाउज हो भनेर सोध्नु भयो भने, म भन्छु फुकुशिमा प्रान्तको मिहारू ताकिजाकुरा। मिहारू तकिजाकुरा रूख १००० बर्ष भन्दा पुरानो हो। यस सुन्दर चेरी रूखलाई लामो समयदेखि स्थानीय मानिसहरूले सुरक्षित र माया गरेका छन्। Miharu Takizakura लाई कदर गर्न भर्चुअल ट्रिपमा जाऔं! फुकुशिमा प्रान्तमा मिहारू तकिजाकुराको फोटो फुकुशिमा प्रान्तमा मिहरू ताकिजाकुरा = शटरस्टॉक फुकुशिमा प्रान्तमा मिहरू ताकिजाकुरा फुकुशिमा प्रान्तमा मिहारू ताकिजाकुरा फिक्सुमा प्रुत्कुराक्षेत्रमा प्रिफेक्चर = शटरस्टक फुकुशिमा प्रान्तमा मिहारू ताकिजाकुरा = शटरस्टॉक फुकुशिमा प्रान्तमा मिहरू ताकिजाकुरा = शटरस्टक मर्कु ताकिजाकुरा फुकुशिमा प्रान्तमा मिहारू ताकिजाकुरा फिचुकुमा फिचरको मिटिru टुकिजाकुरा पढ्छु। फिर्ता गर्न "Best of Fukushima"सम्बन्धित पोष्टहरू: तस्बिरहरू: फुकुशिमा प्रान्तमा हानमियामा पार्क फोटोहरू: ११ जापानी चेरी फूलहरूको पूर्ण आनन्द लिने किवर्डहरू फोटोहरू: जापानमा हिउँले ढाकिएका गाउँहरू फोटोहरू: माटो योशिनो -11०,००० चेरी रूखहरू वसन्त omतुमा खिलिरहेका छन्! फोटोहरू: कोयासन फोटो: आइस जिन्गु मन्दिर माई प्रिफेक्चर फोटोहरूमा: इशिकवा प्रान्तको कानाजावा फोटोहरू: सान'इन -ए रहस्यमय भूमि जहाँ पुरानो जमाना जापान रहन्छ! फोटोहरू: शिगा प्रान्तको बिवाको उपत्यका फोटो: शोगावा गोर्जे क्रूज - शुद्ध सेतो संसारमा रिभर क्रूज फोटोहरू: काशिमा- ईबुराकी प्रिफेक्चर फोटोहरूमा जिन्गु तीर्थ: सकुरा- चेरी फूलहरू ...
फोटोहरू: मियागाकी प्रान्तमा टाकचीहो
ताकाचीहो एक रहस्यमय भूमि हो जसलाई जापानी पौराणिक कथाको घर भनेर चिनिन्छ। यो पूर्वी क्युशुको मियाजाकी प्रान्तको पर्वतीय क्षेत्रमा अवस्थित छ। शहरले अझै पनि पौराणिक स्पटहरू र कागगुरा उनीहरूसँग सम्बन्धित नृत्यहरू कायम गर्दछ। यो शरद inतु मा बादल को सुन्दर समुद्र को लागी पनि प्रसिद्ध छ। र यस शहरको सबैभन्दा लोकप्रिय पर्यटन स्थल ताचाचीहो घाटी हो। धेरै फोटोहरूको साथ Takachiho गर्न भर्चुअल यात्रा गरौं! Takachiho Takachiho को Miyagaki प्रान्त = Shutterstock Takachiho मा Miyagaki प्रान्त = ADobeStock Takachiho मा Miyagaki प्रान्त Takachiho मा Miyagaki प्रान्त = Shutterstock Takachiho मा Miyagaki प्रान्त = Shutterstock Takachiho मा Miyagaki प्रान्त Takachiho मा Miyagaki प्रान्त Takachiho मा Miyagaki प्रान्त = Shutterstock Takachiho मा Miyagaki प्रान्त Takachiho मा फोटो मियागाकी प्रिफेक्चर नक्शामा ताकाचीहो म तपाईलाई अन्त सम्म पढ्नको लागि प्रशंसा गर्छु। "सर्वश्रेष्ठ मियाजाकी" सम्बन्धित पोष्टहरूमा फर्कनुहोस्: फोटोहरू: गुन्मा प्रान्तमा ओज फोटोहरू: शिगा प्रान्तमा बिवाको उपत्यका फोटोहरू: इशिकावा प्रान्तको कानाजावा फोटो: फुकुशिमा प्रान्तको हनम्यामा पार्क: फोटो प्रख्यात फोटो जियुनू तीर्थ: नागासाकीमा गुन्जानिमा टापु प्रिफेक्चर फोटोहरू: नागानो प्रान्तमा तोगाकुशी तीर्थ फोटो: यामागुची प्रान्त फोटोमा मोटोनोसुमी तीर्थ फोटो: फुकुशिमा प्रान्तमा ताडामी लाइन फोटो: ओकिनावा प्रान्तमा शुरी कासल फोटो: शिमेन् प्रिफेक्चर फोटोहरूमा म्याट्यू: शिगा प्रान्तमा हिकोन महल
"भ्रमण गर्नुभएकोमा धन्यबाद"Best of Japan”! मेरो नाम बोन कुरोसावा हो र मेरो लक्ष्य उपयोगी जानकारी आशावादी आगन्तुकहरू र जापानमा रुचि राख्नेहरूलाई प्रदान गर्नु हो। यी लेखहरू, चित्र र भिडियोले तपाईंलाई जापानको अनौंठो स्वाद दिनेछ। म आशा गर्दछु कि "Best of Japan"तपाईं जापानको नजीक महसुस गर्नुहुनेछ र तपाईले के अपेक्षा गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारे राम्रो विचार छ।
यस साइटमा जापानको आनन्द लिनुहोस्!
यो साइट कम्प्युटरबाट राम्रोसँग देखिन्छ। केहि भिडियोहरू तपाईंको स्मार्टफोनबाट प्ले हुन सक्दैन। यद्यपि तपाईको स्मार्टफोनबाट तपाईले लेखहरु पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ जुन जापानमा तपाईलाई नयाँ जानकारी दिईन्छ। यस वेबसाइटका बाह्य लिंकहरू तपाईंको लाभको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
त्यहाँ धेरै साइटहरु छन् कि जापान परिचय। यद्यपि यो साइट भर्खरै सुरू भएको छ। म यो सामग्री नियमित आधारमा अपडेट गर्न जारी राख्छु।
जब तपाईं जापानको बारेमा जान्न चाहानुहुन्छ वा पढ्नको लागि कुनै रोचक कुरा चाहिन्छ।Best of Japan”तपाईको उत्तम विकल्प हो!
यस साइट को मेनू
तपाईं कुन पृष्ठबाट जापान अन्वेषण गर्न चाहनुहुन्छ?
जापानी जीवन र संस्कृति! प्रकृति र मानिससँग मिलेर बस्नुहोस्
यहाँबाट म तपाईंलाई जापानी जीवन र संस्कृतिमा परिचय दिन चाहन्छु। मलाई लाग्छ कि जापानी जीवन र संस्कृति बुझ्नको लागि कुञ्जी शब्द "सद्भाव" हो। त्यसकारण, म जापानी जीवन र संस्कृतिलाई यस साइटमा "सद्भाव" को दृष्टिकोणबाट संक्षेप गर्न चाहन्छु। "सद्भाव" जुन जापानी जीवन र संस्कृतिमा आधारित छ जापानको बारेमा तपाइँसँग कस्तो छवि छ? केहि मानिसहरु बाट जापान बुझ्न को लागी धेरै गाह्रो देश देखिन्छ। जापान एक अर्थमा "गलापागोस" हुन सक्छ। महाद्वीपबाट टाढा टापुको देशमा, अनुपम रहने र संस्कृतिको पालनपोषण गरिएको छ। जापानमा आएपछि धेरै मानिसहरू जीवन र संस्कृतिमा छक्क पर्दछन् जुन गालापागोस जस्ता विकास भएको छ। टोकियो र ओसाका जस्ता विशाल शहरहरूको विकास हुँदा चार सिजनहरूको समृद्ध प्रकृतिले आगन्तुकहरूलाई स्वागत गर्दछ। तीर्थनहरू, सुमो र काबुकी जस्ता परम्परा अझै बाँकी छन्, तर नयाँ संस्कृतिहरू जस्तै एनिमेसन, कोस्प्ले, रोबोटहरू, आदि एक पछि अर्को जन्मन्छन्। एक देश जहाँ सबै विरोधाभासी चीजहरू सहजीवी छन्। त्यो जापान हो। यदि तपाईं तलको छवि क्लिक गर्नुहुन्छ भने, तपाईंलाई जापानी रहस्यमय सद्भावको संसारमा ल्याइनेछ। मैले बिभिन्न पृष्ठहरू तयारी गरेको छु, त्यसैले कृपया धेरै पृष्ठहरू भ्रमण गर्नुहोस् र रमाईलो गर्नुहोस्। प्रकृतिको साथ सद्भाव सहितको परम्परा आधुनिकता जापानी जीवन र संस्कृति परिचय भिडियो सिफारिश भिडियो म अन्तको लागि तपाईं पढ्न प्रशंसा। मेरो बारेमा घर फिर्ता बोन कुरोसवा मैले लामो लामो निहोन केजाई शिम्बुन (NIKKEI) का लागि वरिष्ठ सम्पादकको रूपमा काम गरें र हाल स्वतन्त्र वेब लेखकको रूपमा काम गर्दैछु। NIKKEI मा, म थिए ...
२० जापानमा गर्नु पर्ने उत्तम चीजहरू र आरक्षण कसरी गर्ने
जापानको यात्रामा तपाई धेरै चीजहरूको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ। ती मध्ये, कुन प्रकारको कुराको लागि तपाईं आफ्नो यात्रा योजना निर्माण गर्ने चाहानुहुन्छ? यस पृष्ठमा, मैले गणना गरें जुन तपाईं जापानमा आनन्द लिन सक्नुहुन्छ। तपाईले रूची राख्नु भएको वस्तुको छविमा क्लिक गर्नुहोस् र अधिक विस्तृत जानकारी प्राप्त गर्नुहोस्। टिकट बुकि wearingका लागि आधारभूत जानकारी र किमोनो लगाएका अपरिचित विदेशी पर्यटकहरूको भ्रमण गर्ने, जापानको राष्ट्रिय परम्पराको पोशाक सेन्सोजी मन्दिरमा टोकियो, जापानको प्रसिद्ध मन्दिरमा चलिरहेको छ = शटरस्टकले तपाईलाई जापानमा के रमाउनुपर्दछ भनेर वर्णन गर्नु अघि कृपया एउटा आधारभूत सूचना बारे सचेत रहनुहोस्। तपाईंको यात्रा अद्भुत। त्यो कसरी विभिन्न टिकटहरू र टुरहरू बुक गर्ने बारेमा छ। म यस लेखलाई निम्न लेखमा प्रस्तुत गर्दैछु, त्यसैले कृपया तपाईंलाई रुचि छ भने ड्रप गर्नुहोस्। २० जापानको यात्रामा तपाईंले आनन्द लिन सक्नुहुने २० उत्तम चीजहरू त्यसपछि तल, म तपाईंलाई सिफारिस गर्दछु २० चीजहरू सूचीबद्ध गर्दछु। यदि तपाइँ प्रत्येक छविमा क्लिक गर्नुहुन्छ, तपाइँ सम्बन्धित लेखमा जान सक्नुहुन्छ। जापानी फूड्स शपिंग हिम स्थल चेरी ब्लास्म्स फूलहरू जापानको क्योटो, एन्कोजी मन्दिरमा शरद colorfulतु रंगीन पत्ते जापानी बगैचा हेर्न र आनन्द लिन दुई जना जापानी केटीहरू रेड कार्पेट फ्लोरमा बस्छन्। यहाँ रिन्जाइ जेन सेक्ट छ र गिरावट seasonतुको मौसममा धेरै प्रख्यात छ = शटरस्टक शरद Japaneseतु जापानी बगैंचा ओन्सेन (तातो वसन्त) जनावरहरू र माछा पैदल यात्रा Cosplayer जापानको कोस्प्ले उत्सवमा चरित्रको रूपमा छ। cosplay ", ओसाका, जापान = शटरस्टक मनोरन्जन पार्क र थीम पार्क समारोहहरू ...
यस साइटमा, मसँग जापानको बिभिन्न ठाउँहरूमा व्यक्तिगत रुपमा परिचय गराउन पृष्ठहरू छन्। तपाईं पृष्ठहरूमा जान सक्नुहुन्छ मेनू हेरेर र तपाईंलाई रूचि भएको शीर्षकहरूमा क्लिक गरेर। तथापि, मैले यी पृष्ठहरू तल सूचीबद्ध गरें। निम्नलाई हेर्नुहोस् र यदि त्यहाँ तपाईंको रूचिको पृष्ठ छ, कृपया यसमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यो पृष्ठमा जानुहोस्। किनकि जापान उत्तर र दक्षिणमा एकदम फराकिलो देश हो, उत्तरमा होक्काइडो र दक्षिणमा क्युशु र ओकिनावा एकदम फरक छन्। मलाई आशा छ कि तपाइँ तपाइँको मनपर्ने जापान मेरो साइट मा पाउनुहुनेछ। १० सर्वश्रेष्ठ यात्रा कार्यक्रम: तपाई कहाँ जान चाहानुहुन्छ? यदि तपाईं जापानमा कस्तो किसिमका दर्शनीय स्थलहरूको अवलोकन गर्न चाहनुहुन्छ भने, कृपया तलको पृष्ठ पढ्नुहोस्। जापानमा यात्रा गर्दा सर्वश्रेष्ठ गन्तव्यहरू जापानमा सबैभन्दा लोकप्रिय गन्तव्यहरू निम्न हुन्। स्लाइड छविहरू हेर्नुहोस् र तपाईंलाई मनपर्ने स्थानमा क्लिक गर्नुहोस्। निम्न क्षेत्र द्वारा सम्बन्धित लेखहरू छन्। होक्काइडो सिफारिश गरिएका गन्तव्यहरू सप्पोरो हाकोडेट फुरानो / बीइ तोहोकु क्षेत्र (होन्शुको पूर्वोत्तर भाग) सिफारिस गरिएका गन्तव्यहरू सेंडाई (मियागी प्रान्त) तौडा, ओइरस (अओमोरी प्रान्त) कञ्जोगाका क्षेत्र टोक्यो क्षेत्र (आसपास फुकुशिमा प्रान्त) (कानगावा प्रान्त) चुबु क्षेत्र (केन्द्रीय होन्शु) सिफारिश गरिएका गन्तव्यहरू फुजी (यामानशी, शिजोओका प्रान्त) शिराकावागो (जिफु प्रान्त) कनाजावा (इशिकावा प्रान्त) कन्साई क्षेत्र (क्योटो र ओसाकाको वरिपरि) सिफारिश गरिएका गन्तव्य क्योटो (क्योटो प्रान्त) ) ओसाका (ओसाका प्रान्त) चुगोकु क्षेत्र (पश्चिमी होन्शु) सिफारिश गरिएका गन्तव्य हिरोशिमा (हिरोशिमा प्रान्त) मियाजीमा (हिरोशिमा प्रान्त) मत्सु (Shimane ...
जापान मा आवास बुक कसरी गर्ने!
त्यहाँ बिभिन्न अनौंठो शौकका साथ व्यक्ति छन्। वास्तवमा, मलाई होटल आरक्षण साइटहरू तुलना गर्न मन पर्छ। जब म होटल बुकि गर्दछु, म यसलाई धेरै बुकिंग साइटहरूमार्फत जाँच गर्दछु र साइटको साथ बुक गर्छु जुन म धेरै विश्वस्त थिए। मेरो यस्तो शौकको साथ, मलाई लाग्छ कि त्यहाँ पर्यटकहरू छन् आरक्षण आरक्षण साइटहरू जुन म सिफारिस गर्न सक्दिन। यसैले, म होटल रिजर्भेसन साइटहरू सबैका लागि सिफारिस गरिएको होटल परिचयकर्ताहरूको परिचय दिनेछु "Best of Japan"अब देखि। यस पृष्ठमा, मैले सिफारिस गरेको केही होटल आरक्षण साइटहरूको परिचय दिनेछु। जापानमा होटल, र्योकन, मिन्सुकु जस्ता आवासको बारेमा विवरणहरूको लागि कृपया निम्न लेख हेर्नुहोस्। प्रत्येक छविमा क्लिक गर्नुहोस्, बुकिंग साइट हुनेछ। छुट्टै पृष्ठमा प्रदर्शित २ जापानमा बुकिंग आवासको लागि उत्तम तुलना साइटहरू त्यहाँ वास्तवमै धेरै साइटहरू छन् जुन तपाईं जापानमा होटेल वा रियोकन बुक गर्न सक्नुहुनेछ। यो सबै देख्न लगभग असम्भव छ। त्यसैले, पहिलो कुरा म सिफारिस गर्न चाहन्छु। यो 'तुलना साइटहरू' हो जहाँ तपाईं धेरै होटल आरक्षण साइटहरूको आवास योजनाहरू तुलना गर्न सक्नुहुन्छ। TripAdvisor TripAdvisor यदि तपाईं टोक्यो वा क्योटो जस्ता केही शहरमा तपाईंको लागि सहि आवासको खोजी गर्न चाहानुहुन्छ भने, म सिफारिश गर्दछु कि तपाईंले पहिले ट्रिपअड्वाइजरमा जाँच गर्नुभयो। धेरै प्रख्यात तुलना साइट। यस साइटका दुई फाइदा छन्। पहिलो, ट्रिपएडवाइजर प्रयोग गरेर तपाई आफूले जाने शहरमा सबैभन्दा धेरै मूल्या in्कन गरिएको होटल आदि बारे जानकारी संकलन गर्न सक्नुहुनेछ। दोस्रो, तपाईले सस्तो बसोबास पाउन सक्नुहुन्छ। गन्ध योजना ...
जापान मा यातायात! जापान रेल पास, शिन्कानसेन, एयरपोर्टहरू आदि।
जापान मा यात्रा गर्दा तपाईं shinkansen (बुलेट ट्रेन), हवाइजहाज, बस, ट्याक्सी, कार भाडा आदि संयोजन गरेर धेरै कुशलतासाथ अघि बढ्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईंले आफ्नो यात्रामा Shinkansen सवारी जोड्नुभयो भने, यो रमाईलो स्मृति हुनेछ। त्यो अवस्थामा, "जापान रेल पास" खरीद गर्न धेरै उचित हुनेछ। यस पृष्ठमा, म तिनीहरूको एक सिंहावलोकन प्रस्तुत गर्नेछु। यो पृष्ठ धेरै लामो छ। यदि तपाइँ प्रत्येक आईटममा "शो" बटन क्लिक गर्नुहुन्छ, विस्तृत लुकेका सामग्रीहरू प्रदर्शित हुनेछन्। सामग्री को तालिका को लाभ उठाउन गर्नुहोस्। तपाईं यस पृष्ठको तल दायाँ तिर एरो बटन थिचेर शीर्षमा फर्कन सक्नुहुनेछ। जापान रेल पास "जापान रेल पास" को आधिकारिक वेबसाइट। यसलाई क्लिक गर्नुहोस् र यो छुट्टै पृष्ठमा प्रदर्शित हुनेछ। छवि क्लिक गर्दा यस नक्शालाई जापान रेल पासको आधिकारिक वेबसाइटमा छुट्टै पानामा देखा पर्नेछ। यदि तपाईं शिन्कानसेन जस्ता जेआर रेलहरूको प्रयोग गरेर जापान भित्र यात्रा गर्ने योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं खरीद गर्न सक्नुहुन्छ प्रस्थान अघि "जापान रेल पास"। जापान रेल पास (जसलाई सामान्यतया JR Pass पनि भनिन्छ) एक धेरै लागत प्रभावी रेल दर्रा छ जुन जेआरले विदेशी पर्यटकहरूको लागि प्रस्ताव गर्दछ। तपाईं जेआरको शिन्कानसेन र नियमित एक्सप्रेस आदिमा धेरै सवारी गर्न सक्नुहुन्छ। जापान रेल पासको मूल्य उदाहरणका लागि 33,000 7,००० येन प्रति व्यक्ति (days दिन, साधारण कारको प्रकार) हो। जापानमा टोकियो र ओसाका बीच शिन्कन्सेनमा एक जनालाई पछाडि जान २ 28,000,००० येन लाग्छ। यदि तपाइँ धेरै JR प्रयोग गर्नुहुन्छ, जापान रेल पास तपाइँको शक्तिशाली "मित्र" बन्नेछ। तल छ ...
सिफारिस गरिएका लेखहरू / तयारी
मलाई यस साइटमा लेखहरूको केहि परिचय दिनुहोस्।
त्यहाँ बिभिन्न अनौंठो शौकका साथ व्यक्ति छन्। वास्तवमा, मलाई होटल आरक्षण साइटहरू तुलना गर्न मन पर्छ। जब म होटल बुकि गर्दछु, म यसलाई धेरै बुकिंग साइटहरूको साथ जाँच गर्छु र यो साइटको साथ बुक गर्छु जुन म धेरै विश्वस्त थिए। मेरो यस्तो शौकको साथ, मलाई लाग्छ कि त्यहाँ पर्यटकहरू छन् ...
जापानमा कसरी टिकट र टुरहरू बुक गर्न र खरीद गर्न सकिन्छ! सुमो, बेसबल, कन्सर्ट, गतिविधिहरू ...
यदि तपाईं भ्रमणमा भाग लिनुहुन्न जुन ठूलो समूहसँग कार्य गर्दछ र तपाईं मित्रहरू वा परिवारसँग जापानमा स्वतन्त्र रूपमा यात्रा गर्नुहुन्छ भने, तपाईं कसरी खेल प्रतिस्पर्धा र कन्सर्टको लागि टिकट बुक गर्नुहुन्छ र खरीद गर्नुहुन्छ। वा तपाइँ गतिविधिहरू जस्तै टुरहरूको लागि कसरी आवेदन गर्नुहुन्छ? त्यहाँ बुकिंग साइटहरू छन् ...
जापान मा यात्रा गर्दा तपाईं shinkansen (बुलेट ट्रेन), हवाइजहाज, बस, ट्याक्सी, कार भाडा इत्यादि संयोजन गरेर धेरै कुशलतासाथ अघि बढ्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईंले आफ्नो यात्रामा Shinkansen सवारी जोड्नुभयो भने, यो रमाइलो स्मृति हुनेछ। त्यो अवस्थामा, "जापान रेल पास" खरीद गर्न धेरै उचित हुनेछ। यस पृष्ठमा, म ...
सिफारिस गरिएका लेख / गन्तव्यहरू
सिफारिस गरिएका लेखहरू / रूचिहरू
जापानको यात्रामा तपाई धेरै चीजहरूको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ। ती मध्ये, तपाई कुन प्रकारको कुराको लागि आफ्नो यात्रा योजना बनाउने चाहानुहुन्छ? यस पृष्ठमा, मैले गणना गरें जुन तपाईं जापानमा आनन्द लिन सक्नुहुन्छ। तपाईलाई रूचि भएको वस्तुको छविमा क्लिक गर्नुहोस् ...
जापान मा यात्रा गर्नु अघि जान्नु पर्ने ११ आधारभूत जानकारी
जापानी जीवहरू जुन यो स्लाइड शोमा देखा पर्दछ निश्चित रूपमा तपाईंलाई उपयोगी जानकारी पुर्‍याउनेछ!
जापान भ्रमण गर्नका लागि उत्तम समय कहिले हो?
जापान यात्रा को लागी वर्ष को सबै भन्दा राम्रो समय कहिले हो? उत्तर तपाईंको यात्राको लागि उद्देश्यमा निर्भर गर्दछ। सायद तपाई जापानको प्रसिद्ध चेरी फूलहरू हेर्न चाहानुहुन्छ? यदि त्यसो हो भने, म अप्रिल को महीनामा जापान आउन सिफारिस गर्दछु। हुनसक्छ तपाईं सुन्दर हिउँ परेको दृश्यहरू हेर्न चाहानुहुन्छ? जनवरी देखि फेब्रुअरी मा होक्काइडो, तोहोकु वा नागानो भ्रमण गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। यदि तपाइँ शरद पातहरूको आनन्द लिन चाहानुहुन्छ भने, नोभेम्बरको वरिपरि सबै भन्दा राम्रो हुन्छ। यदि तपाईं होक्काइडोमा शरद leavesतु पातहरू हेर्न लाग्नु भएको छ भने, अक्टुबर वरिपरि सबै भन्दा राम्रो हो। यस लेखले प्रत्येक मौसममा सबै भन्दा राम्रो सुविधाहरू हाइलाइट गर्दछ। वसन्त - मार्च, अप्रिल, मे: सुन्दर फूलहरूको मौसम फुजी, जापान = हिबोची समुद्रतट पार्क, इबाराकी, जापानमा एडोब स्टक नेमोफिला जापानमा वसन्त timeतु मार्च, अप्रिल र मे महिनाहरूमा हुन्छ। मार्चको अन्तिम weeks हप्ताहरू र अप्रिलको पहिलो weeks हप्ता वसन्तमा यात्राको लागि उपयुक्त समयहरू हुन्। विद्यार्थीहरूले स्कूलको वर्ष समाप्त गर्दै छन् र कार्यरत वयस्क अझै काममा छन्। जापानी स्कूल वर्ष अप्रिल मा शुरू हुन्छ र मार्च मा अर्को वर्ष समाप्त हुन्छ। चेरी फूल सामान्यतया स्कूल वर्ष बीच दुई हप्ता अवधिमा खिलछन्। तपाईं जापान मा कता जानुहुन्छ त्यसमा निर्भर गर्दै, तपाईं प्राय: त्यहाँ उपस्थित हुनको लागि एक चेरी खिलिको उत्सव फेला पार्न सक्षम हुनुहुनेछ। वसन्त मौसम दिनको समयमा उत्कृष्ट छ तर रातहरू अझै थोरै चिसो हुने सम्भावना छ - ग्रीस, जुलाई, अगस्ट: होक्काइडो र गर्मी चाडहरू सिफारिस गरिन्छ रंगीन फूलको क्षेत्र र सिकिसै-नो-ओका, बीइ, होक्काइडो, मा नीलो आकाश। ।
भाषा! Japanese चीजहरू याद गर्नुपर्दा जापानी मानिसहरुसँग कुरा गर्दा
धेरै जापानी मानिसहरु अ using्ग्रेजी प्रयोग गर्न राम्रो छैन। यस कारणले, जापान आउने मानिस जापानी मानिसहरुसंग राम्रो कुराकानी गर्न सक्दैनन्। विदेशीहरू कहिलेकाँही सोच्दछन् कि कसरी हराउँदछ वा जानकारीको आवश्यक पर्दा कसैलाई कसरी सोध्ने। जब तिनीहरू एउटा सानो शहर वा गाउँ जान्छन् तिनीहरू सजिलैसँग रेस्टुरेन्ट वा रेस्टुरेन्टमा मानिसहरूसँग कुराकानी गर्न सक्दैनन्। जापान मा, तपाईं जापान मा मानिस संग कुरा गर्न के गर्न सक्नुहुन्छ? म निम्न तीन चीजहरूको सिफारिश गर्दछु। मानौं "Sumimasen" जब तपाइँ पहिलो पटक जापानी व्यक्तिसँग कुरा गर्नुहुन्छ जब तपाइँले चिन्नुहुन्न, तपाइँले पहिले तल जापानी वाक्यांश प्रयोग गर्नुपर्नेछ। "Sumimasen" यसको अंग्रेजीमा मिल्दो जुल्दो अर्थ छ "माफ गर्नुहोस्" वा "माफ गर्नुहोस् (तपाईंलाई दु: खी गर्न)"। जापानी भाषामा, यो वाक्यांश धेरै जसो प्रयोग गरिन्छ। "Sumimasen" पनि "धन्यवाद" को रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ वा एक पसल वा रेस्टुरेन्टमा सहयोगको लागि कल गर्न प्रयोग गरिन्छ। यो वाक्यांश एकदम उपयोगी छ जब तपाईं कसैको ध्यान पाउन चाहानुहुन्छ। सामान्यतया, जापानका मानिसहरु अ speaking्ग्रेजी बोल्नमा राम्रो गर्दैनन्। जे होस्, यदि तपाइँ एक जापानी व्यक्तिलाई "Sumimasen" भन्नु हुन्छ तिनीहरू रोकिनेछन् र तपाइँको कुरा सुन्नेछन्। जापानी मानिसहरु दयालु र विदेशी मानिसहरुलाई स्वागत छ त्यसैले कृपया "Sumimasen" प्रयोग गर्न नहिचकिचाउनुहोस् यदि तपाईंलाई मद्दत चाहिन्छ भने। कसैलाई पनि सुन्नु भएकोमा धन्यवाद दिन नबिर्सनुहोस्। चिन्ता नलिनुहोस्। जापानी मानिसहरु अंग्रेजी मा "धन्यवाद" भन्न कसरी बुझ्छन् ताकि उनीहरु तपाईको कृतज्ञता बुझ्नेछन्। कागजमा चिठी लेख्नुहोस् जापानी लजालु छन्, तर जब तपाईं समस्यामा पर्नुहुन्छ, हामी तपाईंलाई मद्दत गर्नेछौं। = शटरस्टक ...
जापानी मुद्रा कसरी मुद्रा विनिमय गर्ने र यसको लागि कसरी भुक्तानी गर्ने
जापान मा मुद्रा येन हो। यस पृष्ठसँग पछिल्लो विनिमय दरहरू छन् त्यसैले कृपया मुद्रा विनिमय गर्नु अघि यहाँ सन्दर्भ गर्नुहोस्। यहाँ तपाइँ जापानी बिल र सिक्का को बारे मा जानकारी पनि पाउनुहुनेछ। थप रूपमा, म जापानमा क्रेडिट कार्डको प्रयोगको सम्बन्धमा हालको स्थिति बुझाउनेछु। विनिमय दर सूची: जापानको सौंसी / अमेरिकी डलर, आदि तपाईको देशको मुद्रामा १ येन कति छ? स्रोत: www.ex بدل-rates.org जापानी बैंक नोट र सिक्का जापान मा पोइन्ट बैंक नोट्स = एडोब स्टक जापानमा चार प्रकारका बैंक नोटहरू छन्। नोट तपाईंले सायद सबैभन्दा अधिक प्रयोग गर्नुहुनेछ नोट १००० येनको। १०,००० येन y,००० येन २,००० येन सिक्का जापानमा = एडोब स्टक जापानमा चार प्रकारका सिक्का छन्। अक्सर १०० येन र १० येनको सिक्का प्रयोग गर्न अपेक्षा गर्नुहोस्। Y०० येन १०० येन y० येन १० येन y येन १ येन जापानको मुद्रासँग सम्बन्धित सिफारिश गरिएका भिडियोहरू जापान पोइन्ट्समा अझै पनि धेरै पसलहरू छन् जसले नगद स्वीकार्छन् जापानमा, त्यहाँ धेरै पसलहरू छन् जुन केवल नगद स्वीकार्छन्। धेरै जसो होटलहरू, डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू, सुपरमार्केटहरू, सुविधा स्टोरहरूले तपाईं क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईं शहरमा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ। केही ट्याक्सीहरूले पनि भर्खर क्रेडिट कार्ड स्वीकार्न आएका छन्। ट्रेन टिकट खरीद गर्ने धेरै विकि machines मेशिनहरूले क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्न सक्दछन्। जे होस्, यदि तपाई मन्दिर वा मन्दिरमा प्रवेश शुल्क तिर्नुहुन्छ भने तपाईसँग नगदी सजिलैसँग उपलब्ध हुनुपर्दछ। एयरपोर्टमा तपाईंको पैसा साट्नुहोस् जापानमा, धेरै थोरै पसलहरूले जापानी येन बाहेक अन्य नगद स्वीकार्छन्। तसर्थ, ...
तपाईंको जापानको यात्राको तयारीको लागि उपयोगी साइटहरूको सिफारिश गरियो
यस पृष्ठमा, म जापानमा सम्बन्धित विभिन्न वेबसाइटहरू परिचय दिनेछु। म समय समयमा यो जानकारी अपडेट गर्ने छु। यो तपाइँको जानकारी एकत्रीत गर्न को लागी एक उपयोगी संसाधन हुन सक्छ। होटल, यातायात, रेस्टुरेन्ट, र स्थानीय सम्बन्धित वेबसाइटहरू कोटिहरू द्वारा विस्तारमा संक्षेप गरिएको छ। यस पृष्ठको तल लिंकहरू भएकाले कृपया त्यहाँबाट तपाईं हेर्न चाहानु भएको पृष्ठमा जानुहोस्। जापान जापान राष्ट्रिय पर्यटन संगठन जापान राष्ट्रिय पर्यटन संगठन (JNTO) को बारे मा व्यापक रूप मा सिकाउने साइटहरु जापानी सरकारको एक पर्यटन सम्बन्धित विन्डो हो। JNTO को आधिकारिक वेबसाइट जापान को लागी दर्शनीय जानकारी को एक बहुत समावेश गर्दछ। यो जानकारी १ 15 भाषाहरुमा छ। यदि जापानमा ठूला प्रकोपहरू छन् भने, यो आधिकारिक वेबसाइटले विदेशी पर्यटकहरूको लागि आवश्यक जानकारी प्रदान गर्दछ। >> JNTO को आधिकारिक वेबसाइट japan-guide.com जापान- guide.com एक प्रसिद्ध वेबसाइट हो जुन जापानमा बसोबास गर्ने विदेशीहरूले सञ्चालन गर्दछ। वेबसाइट निर्माण भएदेखि यसले बिस्तारै यसको लेखहरूको संख्या बढेको छ। यो जापान आउने पर्यटकहरु बीच सबैभन्दा परिचित पर्यटक सूचना साइट हो भनेर भन्न सकिन्छ। वसन्त Inतुमा, यसले जापानमा चेरी फूलहरूको खिलको बारेमा जानकारी प्रदान गर्दछ। >> जापान- guide.com को आधिकारिक वेबसाइट यहाँ छ ZEKKEI जापान ZEKKEI जापान एक पर्यटक सूचना वेबसाइट हो जुन टोकियोको Ginza मा प्रमुख कार्यालयको साथ एक कम्पनी द्वारा संचालित हो। यसले लेखहरू प्रदान गर्दछ जुन सुन्दर छविहरू प्रयोग गर्दछ जापानी सुन्दरताका लागि विदेशमा मानिसहरूलाई। "ZEKKEI" को अर्थ जापानीमा "उच्च सुन्दर परिदृश्य" हो। यसको नामको अर्थ जस्तै, यो एक हो ...
जापानमा सिम कार्ड बनाम पॉकेट वाइफाइ भाडा! कहाँ किन्ने र भाँडामा लिने?
जापान मा आफ्नो बसाई को समयमा, तपाईं एक स्मार्टफोन को उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं कसरी प्राप्त गर्नुहुन्छ? छ वटा सम्भावित छनौटहरू छन्। पहिले, तपाइँ तपाइँको वर्तमान योजना मा रोमि service सेवा को उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ तर दरहरु को लागी तपाइँको सेवा प्रदायक संग जाँच गर्नुहोस्। दोस्रो, तपाईं जापान मा यात्रा गर्दा आफ्नो वर्तमान स्मार्टफोन को लागी नि: शुल्क वाइफाइ प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। अर्को तपाईले सशुल्क Wi-Fi सेवाको सदस्यता लिन सक्नुहुनेछ। तपाईं एक प्रिपेड सिम कार्ड प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ जुन जापानमा तपाईंको अनलक गरिएको स्मार्टफोनको साथ सेवा सक्षम छ। तपाईको देश वा जापानबाट भाडा सेवा प्रयोग गरी जेब वाइफाइ राउटर, सिम कार्ड वा सक्षम स्मार्टफोन पाउन सक्नुहुन्छ। अन्तमा, तपाईले आफ्नो होटेलबाट स्मार्ट फोन भाडामा लिन सक्षम हुनुहुनेछ। तल तपाईलाई निर्णय गर्न सहयोगको लागि प्रत्येक विकल्पहरूको बारे जानकारी छ। तपाईको प्रयोगको लागि उत्तम विकल्प के हो? ओसाका जापानको कन्साइ एयरपोर्टमा सिम कार्ड भेन्डि machine मेशीन तपाईको यात्राको लागि उपकरण छनौट गर्न आवश्यक जानकारी निम्नानुसार छ। लागत-प्रभावी रोमि Services्ग सेवाहरू हालसालै, रोमि services्ग सेवाहरू जुन सस्तोमा विदेशमा प्रयोग गर्न सकिन्छ वृद्धि हुँदै गएको छ। यदि तपाइँको वर्तमान प्रदायक मार्फत सस्तो रोमि services सेवाहरू छन् भने यसलाई प्रयोग गर्ने बारे विचार गर्नुहोस्। पकेट वाइफाइ राउटर यदि तपाईं आफ्नो परिवार वा साथीहरूसँग यात्रा गर्नुहुन्छ भने, जेब वाइफाइ राउटर प्रयोग गर्नु उत्तम हुन्छ। एक वाइफाइ राउटरको साथ तपाईंको समूहले एक पटकमा एक भन्दा बढी स्मार्टफोनको साथ इन्टरनेट प्रयोग गर्न सक्दछ। यदि तपाईंसँग दुई वा बढी Wi-Fi राउटरहरू छन् भने तपाईं विभाजित हुँदा एक अर्कासँग सम्पर्कमा रहन यो सजिलो हुन्छ।
जापान अब समय! तपाईंको देशबाट समय भिन्नता
जापानमा केवल एक समय क्षेत्र छ। टोकियो, ओसाका, क्योटो, होक्काइडो, सेन्दै, नागानो, हिरोशिमा, फुकुओका, कुमामोटो र ओकिनावा सबै एकै समयमा छन्। यसबाहेक, जापानमा डेलाइट बचत समय छैन, त्यसैले तपाईंलाई जापानको समय थाहा छैन। जापान अब तलको समय हो (यदि समय देखाइएको छैन भने कर्सरलाई नक्शाको जापानी भागमा राख्नुहोस्)। कृपया माथिको समयलाई बुझाउनुहोस् र तपाई बस्ने क्षेत्रसँग समय फरक जाँच गर्नुहोस्। यदि देश पूर्व र पश्चिममा लामो छ भने त्यहाँ एउटै देशमा धेरै समय क्षेत्रहरू छन् भने त्यहाँ फरक समय छ। यद्यपि पूर्व र पश्चिममा जापान त्यति लामो छैन। जापानमा, भूमि उत्तर र दक्षिणमा लामो विस्तार हुन्छ, तर पूर्व र पश्चिममा यो त्यति लामो हुँदैन कि समय क्षेत्रलाई दुई वा दुई भन्दा बढाउनु आवश्यक पर्दछ। यस पृष्ठको खरायो हिरोशिमा क्षेत्रको टेकहरा शहरको ओओकुनो टापुमा बस्छ। यस टापुमा करीव २० मानिसहरु छन्, तर 20०० खरायोहरू छन्। उपन्यास "एलिस एड्भेन्चर्स इन वण्डरल्याण्ड" मा, खसरा खल्तीमा हत्तारि भाग्छ। यदि तपाईं ओनो टापुमा जानुहुन्छ भने, तपाईं त्यस्तै रहस्यमय खरायो भेट्न सक्षम हुनुहुनेछ। म तपाईंलाई अन्त मा पढ्न कदर गर्छु। मेरो बारे बोन कुरोसावा "फिन्डेन्टलहरू" मा फिर्ता जानुहोस् मैले लामो समयदेखि निहोन केजाई शिम्बुन (NIKKEI) को लागि वरिष्ठ सम्पादकको रूपमा काम गरें र हाल स्वतन्त्र वेब लेखकको रूपमा काम गर्दैछु। NIKKEI मा, ...
जापान मा छुट्टिहरु! पर्यटक आकर्षणहरू वसन्तको गोल्डेन वीकमा खचाखच भरिएका छन्
जापानमा १ stat वैधानिक बिदा छन्। यदि छुट्टी आइतवारमा आउँदछ भने, पछिल्लो हप्ताको दिन (सामान्यतया सोमबार) त्यस पछि छुट्टी हुनेछ। जापानी छुट्टीहरू अप्रिल महिनाको अन्त्यदेखि मेको सुरूवातमा हप्तामा केन्द्रित हुन्छन्। यस हप्तालाई "गोल्डन वीक" भनिन्छ। थप रूपमा, त्यहाँ एक हप्ताको लागि सेप्टेम्बर मध्य देखि सेप्टेम्बरको अन्त्यसम्म धेरै दिनहरू छन्। यस हप्तालाई "रजत सप्ताह" भनिन्छ। स्कूल छुट्टी जुलाई को अन्त्य देखि अगस्त को अन्त्य हो। कृपया नोट गर्नुहोस् कि यी अवधिहरूमा देशभरि पर्यटन गन्तव्य स्थानहरू भीड हुनेछन्। नयाँ वर्षको दिन: जनवरी १ को तोरी फाटक मेजी जिंगु तीर्थ, हाराजुकु, टोकियो = शटरस्टक नया वर्ष जापानी जनताका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बिदा हो। धेरै व्यक्ति डिसेम्बर २ from बाट छुट्टी लिन्छन् र नयाँ वर्षको दिनमा परिवारसँग समय बिताउँदछन्। नयाँ सालको लागि प्रार्थना गर्न व्यक्तिहरू मन्दिरहरू वा मन्दिरहरूमा जान्छन्। उमेर दिन आउँदैछ: जनवरीको दोस्रो सोमबार युवा जापानी महिलाहरूले उमेर आउँदैका लागि किमोनोस लगाएका थिए, जुन वर्ष उनी २० वर्षको उमेरको लागि जापानको कागोशिमा शहर, शटरस्टकमा उमेर दिवस समारोहको अवसरमा संस्कृति केन्द्रको बाहिर किमोनोमा शटरस्टक महिलाहरू यस दिन, जापानीहरु २० बर्ष भन्दा पुरानोलाई मनाउँछन्। धेरै नगरपालिकाहरु उनीहरुको सम्मान मा मनाउँछन्। युवाहरूले किमोनो वा सूट लगाउँदछन् र कमि of अफ एगको उत्सव मनाउँदछन्। राष्ट्रिय प्रतिष्ठान दिवस: फेब्रुअरी ११ यो जापानको जग स्थापना गर्न को दिन हो। पुरानो कथा अनुसार, सम्राट Jinmu, पहिलो सम्राट, ...
जापान मा वार्षिक घटनाहरु! नयाँ वर्ष, हनामी, ओबोन, क्रिसमस र अधिक!
जापानमा अझै धेरै परम्परागत वार्षिक घटनाहरू छन्। धेरै जापानी मानिसहरु आफ्नो परिवार संग यी वार्षिक घटनाहरु मनाउन छनौट गर्छन्। भर्खर धेरै विदेशी पर्यटकहरूले त्यस्ता घटनाहरूको आनन्द उठाए। यी मध्ये एक घटना मार्फत तपाईं जापानी संस्कृतिको राम्रो विचार प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यस लेखले यी वार्षिक घटनाहरूको विवरण दिन्छ। नयाँ वर्ष घटनाहरू नयाँ वर्षको लागि वार्षिक घटनाहरू जापानमा सबैभन्दा ठूला हुन्। वर्षको अन्त्यबाट निम्न घटनाहरू वार्षिक रूपमा लिन्छन्। जोया नो केन "जोया नो केन" बौद्ध मन्दिरमा आयोजित वार्षिक कार्यक्रम हो = शटरस्टक "जोया नो केन" बौद्ध मन्दिरहरूमा आयोजित वार्षिक कार्यक्रम हो। डिसेम्बर 31१ मा मध्यरातमा पुजारीहरूले मन्दिरको ठूला घण्टीहरू १०। पटक बजाउँदछन्। मानिसहरु लाई लाग्न सक्छ 108 चिन्ताहरु। घण्टी बजाउने पछाडिको अर्थ भनेको ती भावनाहरू हटाउनु हो। तोसी-कोशी सोबा "तोशी-कोशी सोबा" नूडल्स सामान्यतया डिसेम्बर 108१ मा खाइन्छन्। जापानीहरूले लामो भागमा नूडल्स खाए यस आशामा कि उनीहरू भाग्यशाली जीवन बिताउँछन्। जापानको टोकियोको असकुसामा हाटसमोडेको भीड। हाटसमोडे जापानको नयाँ वर्षको पहिलो शिन्टो मन्दिर वा बौद्ध मन्दिर भ्रमण हो = शटरस्टॉक "हत्सुमोडे" मन्दिर वा मन्दिरको लागि वर्षको पहिलो यात्रा हो। नयाँ वर्षमा, प्रत्येक मन्दिर र मन्दिरमा धेरै मानिसहरूले यो भ्रमण गरिरहेका छन्। Setsubun "Setsubun" एक जापानी परम्परागत घटना हो = Shutterstock "Setsubun" एक परम्परागत घटना हो दुष्टता हटाउनका लागि। यो फेब्रुअरीको शुरुमा आयोजित हुनेछ। "ओनि-वा-सोटो, फुकु-वा-यूती" भन्दै जाँदा मानिसहरू घरमा सिमी फ्याँक्छन्, "अर्थ" बाहिर ...
जापानमा मौसम र वार्षिक मौसम! टोकियो, ओसाका, क्योटो, होक्काइडो इत्यादि।
जब तपाइँ जापान भ्रमण गर्ने योजना गर्नुहुन्छ, मौसम र मौसम कस्तो रहनेछ? यस लेखमा म जापानको मौसम र मौसम र प्रत्येक क्षेत्रका सुविधाहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। जापानको मौसम विविध छ जापान एक arch००० किलोमिटर उत्तर र दक्षिणमा विस्तारित द्वीपसमूह हो। यसमा large ठूला टापु र करीव ,,,०० साना टापुहरू छन्। मौसम उत्तरी होक्काइडो र दक्षिण ओकिनावा बीच धेरै भिन्न छ। होक्काइडोमा जाडो धेरै चिसो छ, जबकि ओकिनावा जाडोमा पनि तुलनात्मक रूपमा हल्का छ। जाडो याममा भारी हिउँ पर्ने क्षेत्रहरू होक्काइडोको जापान समुद्री किनार र उत्तरी होन्शुको जापान सागर पक्ष हो। डाटा: जापान मौसम विज्ञान एजेन्सी जापान मौसम एजेन्सी जापान मौसम विज्ञान एजेन्सी जाडो मौसम: जापानको समुद्रतट भारी हिमपात जापानमा हिमपात = शटरस्टक द्वीपसमूहको पछाडिको भाग जस्तै हिमाली पर्वतमालाहरू लामो समयदेखि चलिरहेको छ। यस हिमाली दायराको कारणले गर्दा, जापानी टापुको प्रशान्त क्षेत्र र जापानको समुद्री किनारको मौसम धेरै फरक छ। प्रत्येक जाडोमा, जापानको देशको छेउमा जापानको सागरबाट भिज्ने धेरै बादल पहाडहरूसँग टकरावमा आउँछन्। यहाँ प्रायः हिउँ पर्दछ। यसैबीच, प्रशान्त क्षेत्रमा, सफा मौसम जाडोमा जारी रहनेछ। यदि तपाइँ हिउँदमा हिमाल पर्वतमालाको पश्चिमी क्षेत्रहरूमा जानुहुन्छ, विशेष गरी होक्काइडो र उत्तरी होन्शु, तपाईं हिउँ पर्ने परिदृश्यहरू हेर्न सक्षम हुनुहुनेछ। जापानको वर्षा :तु: जुन वरिपरि परम्परागत जापानी किमोनोमा एउटी आइमाई सुन्दर नीलो हाइड्रेंजिया (म्याक्रोफिला) को साथ सजाइएको दृश्यमा हिंडिरहेकी ...
जापानमा भूकम्प र भोल्टिनो
जापानमा भूकम्प प्रायः देखा पर्छ, साना भूकम्पदेखि लिएर ठूलो घातक प्रकोपसम्म। धेरै जापानीहरु प्राकृतिक संकटहरू कहिले हुन्छ भनेर थाहा नहुने स crisis्कटको भावना महसुस गर्छन्। अवश्य पनि, वास्तवमा ठूलो प्राकृतिक प्रकोपको सामना गर्ने सम्भावना धेरै कम छ। धेरै जसो जापानी मानिसहरु 80० बर्ष भन्दा माथिको उमेर भन्दा बढी बाँच्न सक्षम भएका छन्। यद्यपि स crisis्कटको यो भावनाले जापानको भावनामा ठूलो प्रभाव पार्छ। मानिसहरूले प्रकृतिलाई जित्न सक्दैनन्। धेरै जापानी मानिसहरु यो प्रकृति संग संग रहन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने महसुस गर्छन्। यस लेखमा म तुलनात्मक रूपमा भर्खरको भूकम्प र ज्वालामुखी विस्फोटको बारेमा चर्चा गर्नेछु। जापानमा भैंचालोहरू यदि तपाईं जापानमा केहि बर्ष रहनुभयो भने, तपाईंले आफैंमा कम्तिमा एउटा सानो भूकम्प अनुभव गर्नुपर्नेछ। जापानी भवनहरू भत्काउनको लागि डिजाइन गरिएको छ यदि ठूलो भूकम्प आयो भने पनि। त्यसकारण डराउनुपर्दैन। जे होस्, यदि तपाईं जापानमा दशकौंसम्म बस्नुभयो भने, ठूलो भूकम्पको अनुभव हुने सम्भावना छ। २०११ मा, जब ग्रेट इस्ट जापान महान भूकम्प भयो, म टोकियोको गगनचुम्बी भवनमा काम गर्दै थिएँ र हिंसाले थरथर हल्लाउँदै भवनको अनुभव गरे। पूर्वी जापान ठूलो भूकम्प प्रकोप पूर्वी जापान ठूलो भूकम्प प्रकोप, मार्च ११, २०११ ग्रेट इस्ट जापान भूकम्प (हिगाशी-निहोन दाइसिन्साई) मार्च ११, २०११ मा उत्तरी होन्शुमा लाग्ने एकदमै ठूलो भूकम्प हो। करीव १ 2011,००० पीडित मध्ये% ०% भन्दा बढी भूकम्प पछि सुनामीको कारण मृत्यु भयो। १ 11 2011 occurred मा भएको ठूलो हान्शिन भूकम्प पछि, भूकम्प प्रूफ निर्माण सक्रिय रूपमा गरिएको छ ...
जापानमा आँधी वा भूकम्पको बारेमा के गर्ने
जापानमा पनि टाइफून र भारी वर्षाबाट हुने क्षति विश्वव्यापी तापक्रमका कारण बढ्दो छ। थप रूपमा, भूकम्प प्राय: जापानमा हुन्छ। यदि तपाईंले जापानमा यात्रा गरिरहनु भएको बेला आँधी वा भूकम्प आयो भने तपाईंले के गर्नुपर्छ? अवश्य पनि, तपाईले त्यस्तो केसको सम्भावना देख्नुहुन्न। जे होस्, यो आपतकालको स्थितिमा काउन्टरमेजरहरू जान्न राम्रो विचार हो। त्यसो भए, यस पृष्ठमा, म जापानमा प्राकृतिक प्रकोप आउँदा के गर्ने भनेर छलफल गर्नेछु। यदि तपाईं अहिले आँधी वा ठूलो भूकम्पले ग्रस्त हुनुहुन्छ भने, जापानी सरकारी अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नुहोस् "सुरक्षा सल्लाहहरू"। त्यस तरीकाले तपाईले भर्खरको जानकारी पाउनुहुन्छ। जे भए पनि, सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंसँग शरण लिनको लागि एक सुरक्षित ठाउँ छ। तपाईंको वरिपरिको जापानी मानिससँग कुरा गर्नुहोस्। यद्यपि, सामान्यतया जापानी व्यक्तिहरू अ speaking्ग्रेजी बोल्नमा राम्रो छैनन्, यदि तपाईं समस्यामा हुनुहुन्छ भने तिनीहरू अझै पनि मद्दत गर्न चाहन्छन्। यदि तपाईं कांजी (चिनियाँ वर्णहरू) प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ भने, तपाईं तिनीहरूसँग यस तरीकाले कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। मौसम र भूकम्पहरूको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्नुहोस् ग्रीष्मकालीन टाइफून ओकिनावा एयरपोर्ट = शटरस्टकमा हिट गर्दै मौसम पूर्वानुमानमा ध्यान दिनुहोस्! मलाई विदेशबाट आएका यात्रुहरूले भनेको छ कि "जापानी मानिसहरु मौसम पूर्वानुमान मन पराउँछन्।" निश्चित रूपमा हामी मौसमको पूर्वानुमान हरेक दिन जाँच गर्दछौं। यो किनभने जापानी मौसम हरेक क्षण परिवर्तन हुन्छ। जापानमा मौसमी परिवर्तनका साथै टाइफुनहरू प्रायः गर्मी देखि शरद .तुसम्म हुन्छन्। यसबाहेक, हालसालै ग्लोबल वार्मिंगको प्रभावका कारण भारी वर्षाबाट हुने क्षति बढेको छ। थप रूपमा, भूकम्प र ज्वालामुखी विस्फोटहरू जापानमा प्रायः देखा पर्छन्। यदि तपाईं जापानको यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने, म ...
जापान र जापानी झण्डा को सम्राट
जब तपाईं जापान मा यात्रा गर्नुहुन्छ तपाईंले गहिरो आनन्द महसुस गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईंलाई जापानी इतिहासको आधारभूत ज्ञान छ भने। यस पृष्ठले जापानी इतिहासमा महत्वपूर्ण सम्राटहरूको संक्षिप्त सारांश समावेश गर्दछ। थप रूपमा, म जापानको राष्ट्रिय झण्डा को बारे मा जानकारी समावेश गर्छु। जापानका सम्राट इम्पीरियल प्यालेस, टोक्योको दृश्य। जापान = शटरस्टक जापानले सम्राट प्रणालीलाई प्राचीन कालदेखि नै प्रयोग गरिरहेको छ। सम्राटलाई जापानीमा "टेन्नो" भनिन्छ। पौराणिक कथाका अनुसार पहिलो सम्राट सम्राट जिनमु थिए। भनिन्छ कि सम्राट जिन्मुलाई BC660० ईसापूर्वको ताज लगाइएको थियो तर यो निश्चित छैन। सिंहासनमा उत्तराधिकार एक लामो समय को लागि आनुवंशिकता द्वारा गरिएको छ। १ 1889 1946 in मा बनेको पुरानो संविधानमा सम्राट सार्वभौम थिए। यद्यपि, १2.23 मा लागू गरिएको नयाँ संविधानमा नागरिकहरूलाई शासन गर्ने शक्ति दिइयो र सम्राट एक "प्रतीक" बने। आज, शाही परिवार, सम्राटमा केन्द्रित, प्रतीकात्मक काममा व्यस्त छ। यस काममा घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय घटनाहरूमा भाग लिने काम समावेश छ। रोयल परिवारले टोकियोको इम्पीरियल दरबारमा जनतालाई अभिवादन गर्न वर्षमा दुई पटक "इप्पन साa्गा" लिन्छ। यो जनवरी २ र डिसेम्बर २ on मा देखापर्छ। यस समयमा धेरै व्यक्तिहरू परिवारको झलक देख्न इम्पीरियल प्यालेसमा आउँदछन्, जापानको सम्राटको बारेमा सिफारिश गरिएको भिडियो जापानी झण्डा जापानी झण्डा जापानको झण्डालाई "हिनोमारू" भनिन्छ "। एउटा ठूलो रातो घेरा सेतो पृष्ठभूमिमा कोरिएको छ। रातो घेराले उदाउँदो सूर्यलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। जापानीहरूले सूर्यको पूजा गरेका छन् ...
फोटोहरू: जापानमा वर्षाका दिनहरू - रेनि मौसमहरू जून, सेप्टेम्बर र मार्च हुन्
फोटोहरू: टोकियोको Asakusa मा सेन्सोजी मन्दिर
फोटोहरू: क्योटोमा रुरीकोइन मन्दिरको जादू
जापान मा अक्टूबर! शरद पातहरू पहाडी क्षेत्रबाट सुरु हुन्छ!
फोटोहरू: जापानी बाँस संस्कृति -अराशिअमा बाँस वन, आदि।
फोटोहरू: क्योटोमा दैतोकुजी मन्दिर - प्रकृतिको साथ तालमेलको जेनको संसार
फोटोहरू: क्योटोमा कोडाईजी मन्दिर
जापान मा जनवरी! जापानको जाडोको उत्तम मजा लिनुहोस्!
फोटोहरू: फुकुशिमा प्रान्तमा हनमियामा पार्क